ESI ESI KPOO FOTO NA IPHONE - IOS - 2019
Esi kpoo ihe oyiyi na iPhone
Otu n'ime ihe ndị bụ isi nke iPhone bụ igwefoto ya. Ruo ọtụtụ ọgbọ, ngwaọrụ ndị a na-anọgide na-enwe mmasị na ndị ọrụ nwere nnukwu foto. Ma mgbe ịmepụtara foto ọzọ, ị ga-enwe ike ịme ndozi, karịsịa, iji mee ya.
Mkpụrụ osisi foto na iPhone
Akpanwu osisi na iPhone nwere ike wuru ya nakwa yana editọ foto iri na abụọ na-ekesa na Store Store. Tụlee usoro a n'ụzọ zuru ezu karị.
Usoro 1: Ngwaọrụ iPhone
Ya mere, ị zọpụta foto ịchọrọ ịkụ ihe. Ị maara na na nke a, ọbụghị na ọ dị mkpa iji budata ngwa ndị ọzọ, ebe ọ bụ na iPhone enweelarị ngwá ọrụ wuru iji mee usoro a?
Mepee ngwa foto, wee họrọ onyinyo ahụ ga-edozi.
Kpatụ bọtịnụ dị n'elu aka nri. "Dezie".
Mgbidi nchịkọta ga-emeghe na ihuenyo. Na nchịkọta ala, họrọ akara ngosi ihe oyiyi.
Ọzọ na nri, pịa na akara ngosi.
Họrọ akụkụ nke chọrọ.
Gbanyụọ foto ahụ. Iji chekwaa mgbanwe, họrọ bọtịnụ dị n'akụkụ aka nri ala "Emere".
Mgbanwe ga-etinye ozugbo. Ọ bụrụ na nsonaazụ ahụ adaghị gị, họrọ bọtịnụ ọzọ. "Dezie".
Mgbe foto mepee na nchịkọta akụkọ, họrọ bọtịnụ ahụ "Laghachi"wee pịa "Laghachi na mbụ". Foto ahụ ga-alaghachi na usoro gara aga nke dị tupu ịmalite.
Usoro 2: Snapseed
O di nwute, ngwá ọrụ a na-arụ ọrụ enweghị ọrụ dị mkpa - nhazi nke onwe. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ọrụ na-eji aka ndị nchịkọta foto nke ndị ọzọ na-enyere aka, otu n'ime ha bụ Snapseed.
Ọ bụrụ na i tinyebeghị Snapseed ma, budata ya n'efu na Ụlọ Ahịa App.
Gbaa ngwa ahụ. Pịa akara ngosi akara aka karịa ma họrọ bọtịnụ ahụ "Họrọ site na gallery".
Họrọ oyiyi nke a ga-arụ ọrụ ọzọ. Wee pịa bọtịnụ dị na ala nke windo ahụ. "Ngwaọrụ".
Kpatụ ihe ahụ "Ubi".
N'okpuru ala nke windo ahụ, nhọrọ maka ịpị ihe oyiyi ga-emepe, dịka ọmụmaatụ, ọdịdị na-emeghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ntụle nke akụkụ a kapịrị ọnụ. Họrọ ihe achọrọ.
Dee ntanetị nke nhọta chọrọ ma tinye ya na akụkụ ahụ chọrọ nke onyinyo ahụ. Iji tinye mgbanwe, pịa akara ngosi ahụ na akara akara.
Ọ bụrụ na afọ ojuju na mgbanwe gị, ịnwere ike ịga n'ihu ịchekwa foto. Họrọ ihe "Mbupụ"wee pịa "Chekwa"iji dee ihe mbụ, ma ọ bụ "Zọpụta otu"nke mere na ngwaọrụ nwere ma mbido mbụ ya na nsụgharị gbanwere ya.
N'otu aka ahụ, a ga-eme usoro maka ihe oyiyi oyiyi na nchịkọta ọ bụla, obere esemokwu nwere ike ịbụ naanị na interface.